MAHAMASINA BETAFO : Dahalo nanao fanamiana miaramila nanafika tamin’ny andro antoandro
Tampoka tamin’ny fokonolona ny fahatongavan’ny andian-dahalo tsy latsaky ny folo tamin’ny andro antoandro be nanahary tao amin’ny Fokontany Mahamasina ao anatin’ny Kaominina Betafo, Faritra Vakinankaratra, ny alahady teo. 16 juin 2017
Mirongo fitaovam-piadaina mahery vaika sy nanao fanamiana mpitandro ny filaminana izy ireo, raha ny fanazavan’ny mponina any an-toerana. Tanàna saro-dalana na dia 15 km mianatsimo miala ny Kaominina Betafo no misy ny Fokontany Mahamasina.
Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia ny alahady antoandro tokony ho tamin’ny roa ora no tafiditra tao an-tanàna ireo dahalo nirongo fitaovam-piadiana ireo. Tsy nisy rototra ny fokonolona satria manao fanamiana mpitandro ny filaminana ary tsy misaron-tava ireo dahalo. Rehefa nanapoaka bisy ireto olon-dratsy vao nikorapaka ny olona ary samy nitsoaka nanavotra ny ainy avokoa. Nanamora ny asa ratsin’ireo dahalo izany ka tsy nanahirana azy ireo no namoaka ny omby tao an-tanàna.
Am-polony ireo omby noraofin’ireo dahalo ireo nandritra ity fanafihana ity. Nisy ihany ny fokonolona nanohitra saingy tsy nihambahamba nitifitra azy ireo ny dahalo. Vokany telo amin’ny fokonolona no naratra mafy voatifitra teo amin’ny sandriny sy ny lamosiny. Ireo fokonolona izay tafaporitska kosa no niantso ny mpitandro ny filaminana, ka polisy miisa valo avy ao amin’ny Kaominina Betafo no nanao ny fanarahan-dia.
Raikitra ny fifampitifirana teo amin’ny andaniny sy ny ankilany na dia efa tamin’ny 4 ora hariva aza vao nifankahatratra ny dahalo sy ny Polisy. Tsy afaka nandeha mafy niaraka tamin’ny omby mantsy ireo dahalo moa ny lalana rahateo somary sarotra noho ny haratsiny. Raha ny fanazavan’ny Kaomiseran’ny Polisy ao Betafo dia nisy ihany ireo dahalo voatifitra saingy noentin’ireo namany nitsoaka. Porofon’izany, hoy izy ireo, ny fahitana ra mitete teny amin’ny lalana izay nandehanan’ireo dahalo nitsoaka.
Naharaitra adim-pamantaranandro efatra ny fifampitifirana teo amin’ny Polisy sy ireo dahalo, raha ny fanazavana ihany. Nanomboka tamin’ny 4 ora hariva izany ary tsy nitsahatra raha tsy tamin’ny 9 ora alina. Nahitam-bokany izany satria dia nisy tamin’ireo omby nangalarin’ireo dahalo no efa tafaverina amin’ny tompony amin’izao fotoana izao fa ny ireo dahalo kosa tafaporitsaka. Tamin’ny fahatongavan’ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana kosa vao nentina namonjy tobim-pahasalamana ao amin’ny CHRR Antsirabe ireo olona telo naratra, ka ny iray efa nalefa nody fa ny roa kosa no mbola manaraka fitsaboana noho ny ratra mafy nahazo azy. Araka ny fanazavana ihany dia manohy ny fanarahan-dia ireo Polisy valo lahy.